China 5W Chip na -ebufe, ndị na -eweta ya na ndị na -ebubata ya NEWYEA
Ngwọta nnata ihe chaja ikuku ikuku 15W
5W Na -ebunye Mgbawa, Ngwọta Ngwakọta Otu
Ikuku chaja Portable Power maka ekwentị mkpanaaka Cha ...
Smart Desk chaja ikuku maka ekwentị mkpanaka na ihe siri ike ...
Smart Integrated Fast Battery chaja maka Electric V ...
Smart Electric Vehicle Comercial Fast chaja 22KW f ...
Njirimara ngwaahịaNY7501G-1 bụ mgbawa mgbazị agbakwunyere nke ọma maka chaja ikuku mepụtara dabere na NY7501G. NY7501G chipset ikuku na -akwụ ụgwọ bụ ụdị mgbawa na -ebufe maka chaja ikuku nke kwekọrọ na ọkọlọtọ Qi nke Wireless Power Consortium (WPC), nke nwere ike nweta ike nnyefe 5W maka chaja ikuku ikuku. Ejiri ya na QFN44-0505X075-0.35, a na-etinye ya n'ime ya na mgbaze mgbaama, yana ọtụtụ nchedo. Egosipụtara ya na nchọpụta ihe ala ọzọ (FOD), nchedo oke voltaji (OVP), nchekwa dị ugbu a (OCP) yana ọrụ nchebe ndị ọzọ, ọ nwere ike hụ na nchekwa nke chaja ikuku.
Ihe mgbawa ikuku NY7501G-1 dabara maka 5W monocoil na-ebunye atụmatụ njedebe maka chaja ikuku, yana ezigbo ndakọrịta. N'ihi mpaghara ya nke naanị 5mm*5mm, ọ nwere mgbanwe imewe dị elu, na -eme ka etinye ya na ngwaahịa ahụ ngwa ngwa.
Nlereanya NY7501G Ngwa Onye mgbasa ozi
Ọnụ ọgụgụ Coils 1 Ọnọdụ ọrụ Ntinye eletriki-magnetik
Oke voltaji na -arụ ọrụ 4.5-5.5V Ike nnyefe 5W
Ugboro ọrụ 110kHz-205kHz Mbukota NKP44
Xiamen Newyea Microelectronic Technology Co., Ltd. bụ onye enyemaka nke Xiamen Newyea Group Co., Ltd. nke Dr. Lin Guijiang, onye ọka mmụta sayensị na-eduga n'ịkwụ ụgwọ ikuku na Ọktoba 2015, ọ na-ahụ na ogige ụlọ ọrụ IC na Xiamen n'efu. mpaghara ahia.
Newyea Microelectronic nwere ndị otu R&D siri ike nke gụnyere ndị prọfesọ, ndị dọkịta, nna ukwu na ndị injinia dị elu ọ bụghị naanị site na China, nke bụ ọkachamara na R&D na nrụpụta teknụzụ na -enye ike ikuku, yana ịnye teknụzụ ọkọnọ ikuku maka ubi dị ka wearables smart, smart ekwentị. na ụlọ mara mma. Anyị raara onwe anyị nye ịbụ onye isi na -eweta ngụkọta ngụkọta nke ọkọnọ ike ikuku, yana inye nkwado teknụzụ isi maka mmepe ụlọ ọrụ na -enye ọkụ eletrik na gburugburu gburugburu ebe obibi IoT.
Isi azụmahịa: R&D nke mgbawa chaja ikuku, ọrụ nchaji ikuku na ọrụ nrụpụta ngwaahịa ikuku.
Newyea bụ ụlọ ọrụ na -esonyere WPC nke ọma
(International Wireless Power Consortium) na -eso Samsung, Texas Instruments, National Semiconductor, Philips, Qualcomm na Nokia.
Nke gara aga: Ikuku chaja na Sound Box Blue nha nha njikọ
Osote: Ngwọta nnata ihe chaja ikuku ikuku 15W